CNC Lathe Mhando uye Zvimiro | hardware yemahara
CNC lathe mhando uye maitiro
Kune akati wandei marudzi e CNC michina zvichienderana nebasa ravo. Mune imwe yemhando idzi inopinda iyo cnc lathe. Michina yakanyanyisa uye yakanyatsojeka pane yakajairika lathes, apo chidimbu chakangotendeuka uye mushandisi aitarisira kushandisa maturusi akasiyana kuveza kana kuita kuveza kunodiwa pachidimbu. Iye zvino basa rose iri rinodzorwa nenzira yakadzama nekombuta, zvichibvumira zvikamu zvese kuti zvifanane pakugadzirwa kwehuwandu, kuvandudza kugadzirwa, uye kubvumira basa rakanyanya kuoma kuti riitwe.
Muchinyorwa chino uchadzidza zvese nezve cnc lathes, pamwe nekuwana gwara rekuziva kuti ndeupi modhi yekusarudza uye runyoro rwemhando dzakakurudzirwa kuitira kuti iwe ugone kutenga zvakanaka kuti uishandise mumapurojekiti ako eDIY kana kushandiswa kwehunyanzvi.
1 Iwo akanakisa mhando dzeCNC lathes
1.1 210 mini lathe
1.2 L-Munyu Multipurpose CNC Lathe
2 CNC lathe mhando
2.1 Zvinoenderana nechinyorwa
2.1.1 CNC lathe yesimbi
2.1.2 CNC lathe yehuni
2.1.3 Zvimwe zvinhu zvinogona kushandurwa
2.2 Maererano nematemo
3 Zvinoumba lathes
3.2 Zvikamu zveCNC lathe
3.3 Zvishandiso zveCNC lathe
4 lathe tools
4.1 Zvinoenderana nechinyorwa
4.2 Zvinoenderana nekushandisa kwayo
5 cnc lathe mutengo
6 Mamwe mashoko
Iwo akanakisa mhando dzeCNC lathes
Kana iwe uchitsvaga mimwe michina yakanaka, heano mamwe cnc lathe mazano izvo zvaunogona kutenga zvekushandisa nehunyanzvi kana zvimwe zvakachipa zvekushandisa pachivande kana iwe uri fan weDIY:
Kune mamwe ma brand akanaka eCNC lathes, akadai saSherline, TAIG, Proxxon, Grizzly Industrial, Haas, Z Zelus, Shop Fox, Baileigh, Genos, Hardinge, Tormach, Okuma, Doosan, Mazak, DMG Mori, nezvimwe. Nekudaro, aya mabhureki ekushandiswa kwemaindasitiri kana nehunyanzvi haawanzo kutengeswa pamapuratifomu epamhepo. Nechikonzero ichi takasarudza dzimwe nzira dziri kutengeswa online.
Kana iwe uchitsvaga chimwe chinhu chakanaka, chakachipa, uye chine saizi yakawanda compact yekushandisa yakavanzika kana yeimba yako, unogona kuona Sherline modhi, iyo ine software inoenderana neUbuntu Linux. Proxxon, Z Zelus, Shop Fox, uye TAIG vanewo mamwe mamodheru akachipa. Kune rimwe divi, rekushandisa mumashopu ehunyanzvi, Tormach kana Grizzly inogona kunge yakanaka maererano nekuita-mutengo. Kune indasitiri uye yakakura chiyero, unogona kuenda kuMazak, Genos, Okuma, Doosan, DMG, Haas, nezvimwe.
210 mini lathe
Iyo compact lathe, ine huremu hwakazara hwe83 Kg, uye iine zvinhu zvakaita sechuck dhayamita inosvika 125 mm, spindle inopfuura kubva pa38 mm, inoshanduka inomhanya pakati pe50 ne2250 RPM, tsigiro yekuona kuti vibrations yakadzikiswa, LCD kuratidza kumhanyisa ruzivo, uye yakanyanya kushandiswa kushandiswa. Iyo iri nyore lathe yevanotanga, uye inosanganisira zvinenge zvese zvaunoda, senge simbi lathe, pfuti yemafuta yekugadzirisa, huipi, uye zvimwe zvishongedzo.
L-Munyu Multipurpose CNC Lathe
Iyi inyanzvi yeCNC lathe, modhi LSL1530 kubva kuL-Salt. Huremu hwemuchina uyu weindasitiri matani 1.7, uye ine zviyero zvakakosha, saka unofanirwa kuve nenzvimbo yakakura yekuiswa kwayo. Kana zviri zvehumwe ruzivo rwehunyanzvi, inogona kushandisa zvidimbu zvinosvika 200 mm yakafara, inobvumira chidimbu kureba pakati pe100 ne1500 mm, inoshanda nekumhanya kwekudya kunosvika 40 mm/s, nekunyatsojeka kwe0.00125 mm, ine mota ine simba ye5.5. Kw spindle, inogona kubatana ne220v single-phase kana 380v three-phase network, uye inoenderana neAutoCAD, Type3, ArtCam, nezvimwe. Inogona kushanda nemhando dzose dzehuni.
Imwe CNC lathe yekushandiswa kwemaindasitiri iyo yekugadzira zvidimbu zvine hurefu hwe1500 mm, ine madhayamita anosvika 160 mm kana ari zvidimbu zviviri panguva imwe chete kana kusvika 300 mm kana iri chidimbu chimwe chete. Iine GXK System control system, mubhedha wakasimba, wakanyanya kurongeka, unomhanyisa kusvika 2800 RPM, uye unoenderana ne380v matatu-phase magetsi network.
CNC lathe mhando
Kune dzakawanda marudzi e cnc lathe maererano nezvinhu izvo zvinogona kushanda, zvinoenderana nematemo, nezvimwe. Mamwe lathes anogona kushanda zvakasiyana siyana pasina kugadziridzwa, nekungochinja chishandiso. Zvisinei, mamwe akananga kune rumwe rudzi rwezvinhu uye haazokwanisi kutendeutsa mamwe.
Maturusi eLathe anogona kuve akasiyana, kubva kune vanocheka milling kugadzira imwe mhando yekudhirowa, kune mablades ekubvisa zvinhu, uye kunyange mabheti ekuboora nekuburitsira kunze chidimbu.
CNC lathe yesimbi
Chimwe chezvinhu zvinogona kushandiswa neimwe yemichina iyi isimbi. Muchokwadi, iyo CNC simbi lathe ndeimwe yeanonyanya kushandiswa muchina padanho reindasitiri uye mumashopu mazhinji. Kana iri simbi, zvinhu zvakaita se simbi, aluminium, kana ndarira. Ndiwo anonyanya kuzivikanwa, kunyangwe panogona kunge paine mamwe simbi kana alloys.
Aya simbi lathes anofanira kuva maviri akakosha maitiro. Kune rumwe rutivi vamwe zvishandiso zvakaoma zvekukwanisa kushanda zvinhu izvi zvakaoma zvikuru. Zvichienderana nemhando yezvinhu zvichashandiswa pazviri, zvimwe zvinotariswa zvinofanirwa kuverengerwa:
Chishandiso chinofanira kuva nacho kuoma kunodiwa kugadzira simbi yakasanangurwa pachidimbu.
Dzimwe simbi, dzakadai sealuminium, dzinoda mafeed epamusoro pekurumwa (Fz)Naizvozvo, maturusi ane nyere shoma anofanirwa kushandiswa kusiya imwe nzvimbo yemahara mucheki kuti abudise machipisi makuru anozogadzirwa.
Kune zvinhu zvakaoma kwazvo, hupamhi hwekucheka (Wc) pazasi kumhanya kunogona kushandiswa. kusvika 6-8 miromo.
Nguva dzose remekedza zvinokurudzirwa nemugadziri yeCNC lathe, yakachinjirwa kurudzi rwezvinhu zvauri kuzoshandisa.
Pakati pe zvinhu zvinoshandiswa zvekushandisa izvo zvinogona kushanda simbi, zvinonyanyozivikanwa ndezvi:
tungsten carbide- Ivo vanocheka zvikuru, vanogara, uye vakanakira CNC aluminium lathes.
HSS kana high speed simbi: Iwo akagadzirwa nechinhu chakafanana neanogara achibooresa uye haadhure. Idzo dzakapfava kupfuura dzakapfuura, saka dzinofanirwa kushandiswa kune simbi dzakapfava kana alloys.
Dhaimondi (PCD): iwo ari pakati peakaomesesa, akakwana pakushanda nezvinhu zvaisagona kugadzirwa nemamwe maturusi akapfava.
Zvimwe: anogonawo kuwanikwa mune mamwe masimbi uye alloys, simbi-ceramics, nezvimwe.
Kune rumwe rutivi, rumwe ruzivo rwakakoshawo. Sezvo simbi chinhu chakaoma, kukakavara nechishandiso chinogona kuburitsa tembiricha yakakwira. Nechikonzero ichi, iyi CNC michina kazhinji ine mvura kana mafuta kutonhora sisitimu yekutonhodza nzvimbo yekugadzira.
Uye handingade kukanganwa nezvazvo kuchengetedzeka. Gara kure nemuchina paunenge uchishanda kudzivirira tsaona, kunze kwekunge uri muchina wakavharika, unodzivirira njodzi kuti isaitike. Pamusoro peizvozvo, mumhando iyi yeCNC simbi lathe, machipisi anogadzirwa anogona kucheka zvishoma. Uye kutarisirwa kunofanira kutorwa pakubvisa chikamu kana kuchenesa akati machipisi. Nguva dzose pfeka magirovhosi ekudzivirira, pamwe chete nemagirazi ekudzivirira kuti asasvetuka mumaziso.
CNC lathe yehuni
A CNC huni lathe inogona kugadzira cylindrical kana prism-yakaita zvidimbu zvehuni senge hardwood, plywood, uye softwood. Uye mukati mehuni dzakaoma uye dzakapfava panogona kuva nemhando dzakawanda: oak, pine, cherry, walnut, maorivhi, nezvimwewo.
Wood CNC lathes akasiyana zvishoma kubva simbi lathes mune dzimwe nzira. Kune rimwe divi, hazvidi firiji mvura sepakutanga. Kutaura zvazviri, kana chidimbu chehuni chikanyorova chinogona kukuvara, kuzvimba, kana kusvibiswa. Naizvozvo, michina iyi inoshaya iyo system. Zvisinei, izvi hazvirevi kuti hazvipise kupisa nekuda kwekukweshana. Kutaura zvazviri, unofanira kudaro dzora kumhanya uye kufambira mberi zvakanyanya kuti usapisa kana kupatsanura chidimbu.
Zvimwe zvinhu zvinogona kushandurwa
A CNC lathe inogonawo kushanda zvepurasitiki zvinhu, kunyangwe zvisinganyanyi kuwanda. Kazhinji, mapolymers aya anowanzo kurapwa nenzira dzeextrusion process, molds, nezvimwe. Asi ivo vanogona zvakare kushandisa CNC lathes kugadzira iyo inodiwa chikamu. Vanogovana zvimwe zvakafanana neaya akagadzirwa nematanda, sezvo chiri chinhu chakapfava uye chiri nyore kushanda nacho, pamwe chete chisingadi firiji.
Pakati pezvinhu mapurasitiki akajairika kazhinji:
Ndine chokwadi kuti vazhinji venyu munoziva nemusoro wenyaya 3D printers, uko maitiro avo uye zvivakwa zvakakurukurwa.
Kana iwe ukacherekedza kuwanda kwemasanhu eCNC lathe, ipapo unogona kusiyanisa pakati pemichina yakareruka, ine 2 chete masanhu, kana mamwe akaomarara ayo anobvumira hukuru hukuru hwekufamba kwechishandiso nekuwedzera mamwe matemo. Anonyanya kushandiswa ndeaya:
2 axis: Ndiyo yakanyanya kurongeka, ine maviri mutsara matemo anokwanisa kushanda mukati nekunze kwedhayamita yechikamu, kureva, cylindrical machining, yakatarisana, kudhirowa uye kubaya pakati pechikamu. Asi havazobvumiri kugaya.
3 axis: muchiitiko ichi axis yechitatu inowedzerwa, ichibvumira kugaya, kufinha uye kupinza. Inogona kubatsira kune helical milling.
4 axis: kune matatu apfuura imwe inowedzerwa kuti ikwanise kuita off-center machining mashandiro, kureva, kugadzira mamwe maumbirwo asina kujairika uye akaomarara.
5 axis: yechipiri turret inowedzerwa muCNC lathe, kureva kuti, ingadai iine 2 axes mune imwe neimwe turret (kumusoro uye pasi) uye imwezve inotenderera axis. Izvo zvinobvumira maturusi maviri kuti ashandiswe pachikamu panguva imwe chete, iyo inogona kuita machining nekukurumidza.
zvimwe: Kune zvakare epamberi uye anodhura CNC lathes ane akawanda mbezo, anosanganisira 6 mbezo (main spindle axis, sub spindle axis, kumusoro uye yakaderera turret ine 2 axes imwe neimwe, imwe axis yekuwedzera mukumusoro turret, uye yechipiri chinoruka chinogona kufamba. kunanga kuchirukwa chikuru kuti utore chikamu). Kune zvakare 8-axis, nezvimwewo, asi hazvina kufanana.
Zvakakosha kuziva zvimwe zvinhu nezve cnc lathe, zvose kunzwisisa kubata kwayo, uye kubata nemazvo mudziyo wega wega, nezvimwe.
Lathes anga ari muindasitiri kubva muzana ramakore reXNUMX. Zvisinei, the mazuva ano CNC lathes ivo vakanyanya kuomarara uye otomatiki. Iwo michina inoshandiswa nekombuta nhamba yekudzora uye yakapihwa nemazvo makuru ekushanda zvidimbu. Musiyano nemimwe michina yeCNC ndewekuti, mune iyi nyaya, zvinhu zvacho zvinosungirirwa kumushini uye zvinotenderedzwa nechinorukwa chikuru. Sezvo ichitenderera radially, chigayo chekucheka kana chigayo chichaswededzwa pedyo nechikamu kuti chibvise zvinhu zvinodiwa kuti zvizadzise maitiro anotarisirwa. Zvikamu zvinowanzoshandwa uchishandisa rudzi urwu rwemachining kazhinji mbezo, machubhu, screws, nezvimwe.
CNC inoshandura michina inogona kushanda nemasanhu maviri ndiwo akanyanya kukosha, kune dzakaoma kunzwisisa dzine mwero mukuru zvikuru worusununguko. Kana ari maturusi anosvika pachikamu nekutendeuka, anowanzo kugaya, maturusi anofinha, maturusi eshinda, nezvimwe.
Zvikamu zveCNC lathe
ari zvikamu zvakasiyana izvo zvinogona kuwanikwa pane CNC lathe ndezvi:
Mubhedha: ndiyo bhenji, nheyo huru yemuchina. Izvo zvakasiyana-siyana zvemuchina, senge chirukwa, nezvimwe, zvakaunganidzwa ipapo. Inogona kugadzirwa nezvinhu zvakasiyana zvichienderana nemuchina. Zvigadzirwa zvakaita seHwacheon zvinogadzira mimwe mibhedha yesimbi yemhando yepamusoro yakasimba uye yakagadzikana.
Spindles: ine spindle pachayo, drive system, mota, magiya, chuck, nezvimwe. Icho chimwe chezvikamu zvinofamba zveCNC muchina. Ehezve, chibatiso chezvishandiso chichaiswa muchovha chechombo, umo maturusi ekugadzira anogona kuchinjaniswa.
Mandrel: chimiro chakafanana nevhisi inobata zvikamu kuti zvigadziriswe kuitira kuti zvisafambe panguva yekuita. Iyo huru spindle inoshandura ese apron uye workpiece. Ichi chikamu chinogona kudzikamisa kugadzikana uye kupera kwechikamu kana chisina kugadzikana, pamwe nehukuru hwezvikamu zvinogona kusungirirwa.
Mutungamiri: Ndiyo axis kana gwara iro chishandiso chinozofamba nenzira inotenderwa, zvichienderana nehuwandu hwemasanhu eCNC yekutendeuka muchina.
Head: Inoumbwa neiyo huru mota uye axis inokwidza chuck. Izvi zvinogona kuva zvepamusoro kana zvishoma zvishoma zvekutenderera, izvo zvakakosha kufunga nezvekushanda maererano nemhando ipi yezvinhu. Pamusoro pezvo, ivo vanofanirwa kunge vaine masisitimu ekudzikisa kuzunguzika kubva kumota, kuvadzivirira kuti vasapfuure muchikamu uye nekushandura mhedzisiro.
Counterpoint: Iri kumucheto wakapesana wemusoro, sechimwe chitsigiro chechikamu. Izvo zvinodikanwa kana uchishanda zvikamu zvakareba, senge machubhu, shafts, nezvimwe. Mimwe michina inobvumira kuti tailstock igadziriswe kuti ivandudze kusimba uye nemazvo emuchina.
tool turret: inopa mukana wekuchinja maturusi ekugadzira. Saizi yaro ichatemwa nenhamba uye saizi yezvishandiso izvo muchina unogona kukwira.
Zvishandiso zveCNC lathe
A CNC lathe muchina unogona kushandiswa kutenderera maumbirwo, ane mukati nekunze madhayamita, uye anogona kugadzira akasiyana machining mapatani muchikamu chose. Vamwe mienzaniso yekushandisa Ndizvo:
Akashandura zvikamu zvezvishongo
Zvimwe zvikamu zvekurapa kana maimplants
Gadzira zvigubhu kana zvigubhu
ari CNC muchina maturusi anogona kunge akasiyana zvakanyanya, tichifunga nezverudzi rweblade, kana kuti chinhu chayakagadzirwa nacho.
ari zvishandiso kucheka kweCNC muchina unogona kugadzirwa nezvinhu zvakaita se:
High speed simbi kana HSS: Vanogona kushanda mune zvakajairika kucheka maoparesheni ekuita roughing kana semi-kupedza.
Carbide: Iyo yakaoma kwazvo, uye inogona kushandiswa kune ferrous, isiri-ferrous simbi, mapurasitiki, fibers, graphite, girazi, dombo kana marble, yakajairika simbi, nezvimwe. Hadziviri kupisa, hadzina ngura, uye dzakasimba.
diamond: Zvishandiso izvi zvine kuomarara kwakanyanya uye kusagadzika kwekupfeka, kunze kwekuve neiyo yakaderera coefficient ye friction, yakakwira elastic modulus, yakakwira thermal conductivity, yakaderera coefficient yekuwedzera kwemafuta, uye kuderera kushamwaridzana nesimbi isina-ferrous. Naizvozvo, inowanzo shandiswa kugadzira michina yakaoma kwazvo, brittle zvinhu senge graphite, girazi, silicon-aluminium alloys, ceramics, uye asiri-ferrous simbi.
vamwe: Kune zvakare mamwe akagadzirwa neceramic, cubic boron nitride, nezvimwe.
Zvinoenderana nekushandisa kwayo
Zvichienderana nekushandiswa kwechishandiso, inogona kuiswa se:
Kutendeuka: Inoshandiswa kuita roughing chidimbu, kuitira kuti chigadzirire kunyatso magumo.
drill rod: ibhora rinofinha rinogona kukudza gomba riripo (preformed), kureva kuti, nzira yekuwedzera dhayamita yemakomba, kuburitsa chikamu, kana kugadzira chubhu.
chamfering tool: Unogona kugadzira chamfers, kureva, chamfer pamupendero wekuchinja pakati pezviso zviviri, kana groove. Inogona kushandiswa kubvisa micheto inopinza ine ngozi kubva pachikamu.
knurling tool: Inoshandiswa kudhinda pateni panzvimbo yakatenderedzwa ine nhevedzano yemakomba kana zvimedu. Semuyenzaniso, iwo mavara akakasharara kana ane madoti aunoona pamibato yemamwe maturusi ane mibato yesimbi, kana kubata nzungu kana zvidimbu, zvichingodaro.
Banga: ichaparadzanisa chidimbu muzvikamu zviviri, kunze kwekushandiswa kutendeuka kana kuronga chidimbu. Kune mafomu akawanda.
kucheka shinda: Inoshandiswa kuveza shinda muchikamu.
yekutarisana: yakashandiswa kucheka nzvimbo yakadzikama perpendicular kune axis yekutenderera kwechikamu, ichifambira mberi perpendicularly kuburikidza neaxis yekutenderera kwechikamu.
grooving: Iyi inowanzova carbide inoisa yakaiswa pane yakakosha mudziyo unobata. Yakagadzirirwa dimension kugaya kana slot kugadzira uye mamwe mabasa akaomarara.
chishandiso chekudzidzisa: ine chimiro chakati sandara kana chedenderedzwa, chine micheto yakachekwa kugadzira shinda, undercut, kana groove.
cnc lathe mutengo
Haugone kutaura nezvazvo mutengo we cnc lathe, sezvo zvichizoenderana nerudzi, modhi, huwandu hwematemo, huwandu hwezvishandiso zvaunogona kushandisa, zvigadzirwa, saizi, nezvimwe. Iwe unogona kuwana kubva kune mamwe emazana emaeuro kune mamwe ezviuru zveeuro. Uye zvakare, zvimwe zvinhu zvinokanganisa mutengo wekupedzisira zvinofanirwa kuverengerwa:
Nyika yakabva: Kune CNC vanogadzira muchina muGermany, Japan, Taiwan, South Korea, China, nezvimwe. Zvichienderana nekwakabva, inogona kuve nekukanganisa kukuru pamutengo, ichichipa avo vanobva kuMabvazuva.
nzira yekugadzira: Zvichienderana nemhando uye kushanda kwemuchina, unogona kudhura zvakanyanya kana zvishoma. Muchina wakapfava une kudyara muR&D kwave kuderera hauna kufanana kana zvinhu zvinochipa zvekugadzira zvichishandiswa, kana kana zvakagadzirwa-zhinji kana kugadzirwa zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi. Zvose izvi zvichaita kuti mutengo mumwe kana mumwe.
CNC muchina saizi: zvidiki zvinogara zvichidhura pane zvihombe.
Chigadzirwa: Inogona kuva yakajairwa kana yakaoma michina, yekare ine mitengo yakaderera kana ichienzaniswa neyekupedzisira. Pamusoro pekudhura zvakanyanya kune izvo zvekuwedzera, kugadzirisa uye kugadzirisa zvinogona zvakare kudhura.
tsananguro: huwandu hwematemo, yakanyanya kutenderera kumhanya, mhando yegwaro rekutungamira, vangave vachishandisa inotonhorera sisitimu, chip chekufambisa masisitimu, otomatiki chishandiso kuseta, kushandisa zvakajairwa kana hydraulic chucks, otomatiki kana manual tool shanduko, nezvimwewo, zvichakanganisa mutengo wekupedzisira.
Kutakura: Uye iwe unofanirwawo kufunga nezve mutengo wekutakura muchina, sezvo iwo akakura uye anorema. Dzimwe nguva inogona kukwikwidzana mutengo, asi kana mari yekutumira yakanyanyisa kubva kunyika yako yaunobva, inogona kunge isingakodzeri. Kutakura kunosanganisira kutakurwa nechero nzira, kurongedza, kana zvichidikanwa mudziyo kana flat rack, nezvimwe.
CNC michina: gwara kune nhamba kutonga
Mashandisiro anoita CNC muchina uye mashandisirwo
Prototyping uye CNC dhizaini
Mhando dzese dze CNC michina zvinoenderana nekushandiswa uye maitiro
Mhando dze CNC milling machine
Mhando dzeCNC router uye CNC yekucheka
Mhando dze laser engraving
Mimwe CNC michina: kuchera, Sarudza & Nzvimbo, welding uye nezvimwe
Muchina weCNC ungabatsira sei mukambani
Kutenga Gwaro: Maitiro Ekusarudza Iyo Yakanakisa CNC Machine
Kugadziriswa kwe CNC michina
Definitive gwara pamusoro pevanoronga: chii chinonzi plotter uye ndechei
Iyo yakanakisa CNC michina yekutandara uye kushandiswa kwehunyanzvi
Iwo akanakisa kudhinda plotters
The best cutting plotters
Izvo zvakanakisa zvinodyiwa zvevaumbi: makaturiji, pepa, vinyl, uye zvisara
Yakazara nzira kuchinyorwa: Mahara emahara » Cnc » CNC lathe mhando uye maitiro
Iwo gumi nemaviri mabhuku epamusoro paArduino kunyatso kwanisa bhodhi iri uye hurongwa hwayo
Chirungu bvunzoTest CatalanSpanish quiz